February 19, 2021 - Babal Khabar
Feb192021 by बबाल खबरNo Comments
छोरा’छोरीकै सामु शरी’र सु’म्पिन बा’ध्य पारिएकी यी महिलाको रु’वा’ऊने कथा, टिप्प’रमा जे भयो (भिडियो सहित)
एक महिला टि'पर चढेर उनी घर जान लागे’की थिइन् । उनीसंग साना दुई छोरा’छोरी थिए । वाहिर ठूलो पानी परेको थियो । टिप’रभित्र साना छोराछोरी’को मस्त निदा’एका थिए । विहान पख उनको जिव’नमा जे भयो त्य’सपछि उनी उजाडिइ’न् । विहान पख उनी नि’दाउनै थालेकी थिइन् । उनको श रि रमा टिपर मालिकले कु कर्म गरे । उनले आफु माथि भएको त्यो घट नाको बारेमा उनले श्रीमानलाई बताइन् । उनले श्रीमानलाई आफु माथि घ'टेको त्यो कुरा रुँदै सुनाइन् । उनले अब आफु श्रीमानको ला:यक भइन म के गरुँ भन्दै रुँ’दा उनको श्रीमानले साथ दिए । उनले श्रीमतीलाई लिएर लिएर प्रह’री कार्यालय गइन् । दुई छोरा छोरीको ज्या 'न को बदला तेरो शरिकर चाहियो भनेर टिपर मालि’कले ध 'म्की दिए । उनी छो’राछोरीको ज्या’न जो:गाउन आफ्नो श रिर सुम्पिइन् । यो बाध्य’तामा परेकी श्रीमती’लाई साथ दिएर न्याय खोज्न हिँ’डेका यि जोडीले अहिले सम्म न्याय पाएका छैनन्
एकाएक यसरी सडकमै ट्राफिक प्रहरी छम-छमी नाचेपछि (हेर्नुहोस भिडियो)
ट्राफिक प्रहरीहरु आफ्नै पोसा-कमा चिटिक्क सजिएर छम-छमी नाचेको भिडियो आज सार्वजनिक भएको छ । महा-नगरीय ट्राफिक प्रहरी महा’शाखाले गीत संगीतको माध्यम-बाट ट्राफिक नियम सिकाउने उद्देश्यले भिडियो बनाएको हो । महाशाखाले व्यव’हारिक रुपमा प्रयोग हुने २५ वटा ट्राफिक नियम समेटिएको ट्राफिक नृत्य भिडियो रिलिज गरेको महा’शाखा प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढका’लले जनाएका छन । सरोज ओली र एलिना चौहानको स्वर, नृत्य कोरि’योग्राफर मनराम केसी र निर्देशन तथा छाया’ङ्कन प्रकाश भट्ट, सम्पादन बिष्णु शर्मा र संयोजन विनोद केसीले गरेका छन् । गीतलाई मेट्रो ट्राफिक एफएम ९५.५ मेगा’हर्जको यूट्युब च्यानल:लगायत अन्य सामा’जिक सञ्जालबाट रिलिज गरिएको छ । भिडियो हेर्नुहोस्…
जब भिखारीको चेक साट्नलाई बैंकमा पुगेन पैसा
घट’ना लेबनानको सीदोन शह’रको हो । त्यहाँ’को एक प्रशिद्ध अस्पताल बाहिर वाफा मोहम्मद नाम गरेकी महिला ४० वर्षदेखि दिनभर भिख माग्दै आएकी थिईन्। अस्प’तालमा आउने जाने मानिष:ले दान दिएको पैषाबाट गुुजारा चलाउदै आएको बताउने उनले बैंकमा आफ्नो ब्यालेन्स ब’ढाउदै लगेको कसैलाई थाहा थिएन । कसैले अनु’मान सम्म पनि गरेका थिएनन कि कि उत्त भिख माग्ने महिलाले बैंक’मा पैसा जम्मा गर्दे आए’की छन् भनेर । अन्ततः उक्त माग्ने महि’लाको बैंक अकाउन्टमा यति धेरै पैसा भेटिएको छ कि बैंकले चेक नै साट्न सकेन । उनको खातामा करो’ड हाराहारी रकम भेटि’एपछि बैंकका कर्मचारीनै च’कित परेका छन् ।अहिले ति महिलाले भिख माग्ने ठाउँमा यो विषय निकै चर्चा’को विषय बनेको छ । प्राप्त रिपोर्ट अनु’सार वाफा मोहम्मद आफनो पैसा अर्को बैंकमा ट्रान्स’फर गर्नका लागि पुगेकी थिइन् । त्यस क्रममा बैंकमा नगदको सम’स्या भयो । घट’नापछि सामाजिक सञ्जा’लमा
श’व यात्रा शुरु, चल्यो रु’वाबा’सी, थामिएन कसैको आँ’शु…(भिडियो हेर्नु’होस)
ब’ला’ त्का’र’पछि ह त्या गरिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ च’डेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको श’ब यात्रा शुरु भएको छ । भा’गरथीको मृ ’त्यु भएको १७ औं दिनमा दा’हसं’स्कार ग’र्न ला’गिएको हो । भगरथिको श’ब बैतडी सदरमुकाम बा’ट निकाल्दै गर्दा रु’वाबासी च’लेको थियो ।यसअघि भा’गर’थीका घरपरिवारले दो’षी पत्ता लगाउनुपर्ने र आवश्यक का’नु’नी का’रवा’ही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । प्रहरीले बुधबार च’डेपा’नीकै दिनेश भट्टलाई आ’रोपित भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक गरिएका दिनेशले बुधबारसम्म भागरथीको ह’त्या मात्रै गरेको बताएका थिए तर श’व प’रीक्षण रि’पोर्टमा भने ब’ला’त्का’रपछि ह’त्या गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।त्यसपछि पनि भागरथीका घर परिवारले भने ब’ला’त्का’र गर्ने व्यक्तिको पनि खोजी गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबारसम्म श’व बु’झ्न मा’नेको थिएन । बिहीबार दिनेशका बुवा, अ’नुसन्धान अधिकृत र सरकारी
पूर्वरा’जा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गर्नुभयो यस्तो बक्तब्य, अवश्य पढनुहोला
काठमाण्डौ - पू'र्वरा'जा ज्ञानेन्द्र शाहले नि'षे'ध र वि'भेद'को राजनीतिले देश दिन प्र तिदिन ज'टि'लतामा फ'स्दै गएको बताउनु भएको छ । ७१ औं राष्ट्रिय प्र'जात'न्त्र दिव'सको अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व'रा'जा ज्ञा'न्द्रले प्रजातन्त्र भनेको आवधिक चु'नाव र द'ल विशे'ष नेताको शा'स'न प्र'णाली नभएको बताउनुभयो । हरेक नागरिकले प्राप्त गर्ने सन्तु'लित खुसीमा मात्रै प्र' जा त'न्त्रको प्रा' ण अ'टुट रहने भन्दै उहाँले देश'को प्रति'ष्ठा बढाउन हामी कत्तिको सफल भएका छौँ भन्नेबारे समी'क्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । प्र'जात'न्त्रमा जनश'क्ति र धन सम्पत्ति नै वि'शिष्ट भएको भन्दै उहाँले आम नागरिकको आस्था, चाहना र जन भावनालाई कसैले पनि मेट्न नस'क्ने बताउनु भयो । उहाँले रा'जा र आम नागरिकको सहमति बाट खडा भएको देशमा नि'षे'ध र वि'भे'दको राज'नी'ति सुरू गरिएकाले देश ज'टि'लतामा फ'स्दै गएको समेत बताउनु भएको
आज यि यि ठाउँमा बत्ती जाने, हेर्नुहोस तपाँर्इको त परेन?
काठमाण्डौ - काठ माण्डौका विभिन्न ठाउँमा आज पनि बत्ती जाने भएको छ । फुटुङ, पद्मसाल, चिम्बर पोखरी, साङ्ला फाँट, जरङ्खु, काभ्रे स्थली, देवी स्थान, ठूलो इनार, खुलालटार, थापागाउँ, नागपोखरी, संगम फाँट लगायतका क्षेत्रमा बिहान १० बजे देखि १२ बजेसम्म बत्ती जाने नेपाल विद्युत प्राधि करणले जनाएको छ । बालाजु वितरण केन्द्रमा पर्ने धर्म स्थली फिडर मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले त्यस फिडर बाट विद्युत सप्लाइ हुने क्षेत्रमा बि जुली जाने भएको हो । तोकिएको समय अगावै काम सकिएमा दिउँसो १२ बजेअघि नै विद्युतको लाइन जोडिने प्राधिक रणले जनाएको छ । उज्यालो नेटवर्कबाट साभार
कसरी कमाउन सकिन्छ अनलाइनबाटै पैसा ? यस्तो छ प्रक्रिया…
रुममा यी बिरुवा राख्नुभयो भने पैसाको बर्षा हुनेछ, पुरा पढनुहोस
दुखद खबर: पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै सयौं जनाको मृत्यु भएपछी सरकारले स्वास्थ सङ्कटकाल लगाउन यस्तो गर्दै, हेर्नुहोस्।